Star Wars: The Bad Batch (2021) Season 1 – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Original nameThe Bad Batch
Created byDave Filoni
StarringDee Bradley Baker, Michelle Ang
Synopsis of Star Wars: The Bad Batch (2021) Season 1
Star War ပရိတျသတျတှအေတှကျ လကျရှိပွသနဆေဲဖွဈတဲ့ Animation Series တှကေိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Clone Special Unit ဖွဈတဲ့ The Bad Batch အကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ. Star War Universe နှဈသကျသူတှေ မဖွဈမနကွေညျ့သငျ့တဲ့ Series လေးတဈခုပါ။ အပိုငျး ၁၆ အထိရှိပီး OnGoing Series ဖွဈပါတယျ။
ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖွဈပါတယျ။
Star War ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်ရှိပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ Animation Series တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Clone Special Unit ဖြစ်တဲ့ The Bad Batch အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်. Star War Universe နှစ်သက်သူတွေ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ Series လေးတစ်ခုပါ။ အပိုင်း ၁၆ အထိရှိပီး OnGoing Series ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ်။
Quality – Web-dl 1080p & 4K
Episode 1 (4K)
Episode2(1080p)
Episode2(4K)
Episode3(1080p)
Episode3(4K)
Episode4(1080p)
Episode4(4K)
ProductionLucasfilm Animation, Lucasfilm Ltd.
Firt air date2021-05-04
Episode runtime75,31 min
Home PageStar Wars: The Bad Batch (2021) Season 1